RASMI: FIFA oo ku dhawaaqday saddexda ciyaaryahan ee ku tartami doona abaal-marinta xiddiga sanadka ee The Best – Gool FM
(Yurub) 02 Sebt 2019. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa shaaciyey saddexda xiddig ee kama dambeysta ah oo ku tartami doona abaal-marinta xiddiga sanadka ee The Best.
Virgil van Dijk ayaa ka mid noqday saddexda xiddig ee isagu soo haray abaal-marinta xiddiga sanadka adduunka FIFA ee la bixin doono dhammaadka bishaan September.
Daafaca kooxda Liverpool ee Van Dijk ayaa loo magacaabay todobaadkii la soo dhaafay laacibka sanadka Yurub, waxaana uu haatan ka mid noqday saddex ciyaaryahan ee isugu soo haray abaal-marinta laacibka sanadka Adduunka ee FIFA.
Joog-dheeraha reer Holland waxaa tartanka abaal-marinta ay bixiso FIFA ee The Best ku wehliya kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messki iyo weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Van Dijk ayaa xilli ciyaareedkii hore ka caawiyay kooxdiisa Liverpool hanashada Koobka dhaga-waynaha Champions League waxaana uu markale abaal-marinta xiddiga sanadka kula tartamaya labadii xiddig ee uu kaga abaal-marinta xiddiga sanadka UEFA ee Messi iyo CR7.
Lionel Messi ayaa kooxdiisa Barcelona la qaaday horyaalka La Ligaha xilli ciyaareedkii hore, waxaana uu ku guuleystay abaal-marinta Kabtanka dahabka ah ee Yurub, isagoo haatan ka mid ah musharraxiinta isugu soo haray abaal-marinta FIFA ee The Best.
Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa horyaalka Serie A la qaaday kooxda Talyaaniga ee Juventus, halka uu xulka qaranka kula guuleystay koobka UEFA Nations League.
Saddexdaan laacib ayaa laga soo saaray liiska 10-kii ciyaaryahan ee horay ay u shaacisay FIFA, iyadoo tartankan ay ka hareen xiddigaha kala ah; Sadio Mane, Mohamed Salah, Harry Kane, Eden Hazard, Matthijs de Ligt iyo Frenkie de Jong.
Ciyaaryahanka ku guuleysta abaal-marintan ayaa lagu shaacin doonaa xafladda abaal-marinta FIFA lagu bixin doono oo lagu qabanayo magaalada Milano 23-ka bishan September.